AMP ku xir-xirnaanta taageerada IFrame - SO
AMP ku xir-xirnaanta bogagga leh IFrames
<amp-iframe> isdhexgalka tag
Generator-ga xawaareysan ee xawaaraha ku shaqeeya wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa in iframe lagaliyay boggaaga oo wuxuu u rogayaa wixii iframes ah ee uu ka helo <amp-iframe> tag.
AMPHTML ayaa hadda kaliya oggolaanaysa raridda waxyaabaha leh xiriir HTTPS sax ah!
Generator-ka Xawaare Sare wuxuu si toos ah u hubiyaa in URL-ka loo adeegsaday iframe-ka sidoo kale lagu heli karo iyadoo la adeegsanayo isku xirka HTTPS. Si tan loo sameeyo, Generator-ga la dedejiyey wuxuu si fudud ugu beddelayaa 'HTTP' 'HTTPS' URL-ka. Haddii URL-ka lagu furi karo HTTPS, matoorrada xawaareysan ee loo yaqaan 'Accelerated Mobile Pages' waxay u beddelaysaa iframe-ka 'amp-iframe' u dhiganta sidoo kale waxay ka dhigeysaa waxyaabaha iframe-ka laga heli karo nooca 'AMPHflix'.
Haddii URL-ka aan lagu dhejin karin HTTPS, nuxurka iframe si toos ah looguma soo bandhigi karo nooca AMPHflix. Xaaladdan oo kale, Generator-ga la dedejiyay ee Generator wuxuu soo bandhigayaa qaabeeyaha soo socda ee muuqaalka ah:
Adoo gujinaya garaafkan, isticmaaleha ayaa markaa furi kara waxyaabaha iframe-ka ah iyada oo la adeegsanayo 'xiriir HTTP' oo aan la qarin. Sidan oo kale, waxyaabaha ku jira IFrame ayaa ugu yaraan lagu marin karaa iyada oo loo marayo xal kale oo aan gebi ahaanba la iska indhatirin.